वोर्ल्ड लिंकले ल्यायो १०० एमबिपिएस गतिको इन्टरनेट - Living with ICT
Home / Featured / वोर्ल्ड लिंकले ल्यायो १०० एमबिपिएस गतिको इन्टरनेट
नेपालको पहिलो निजी इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनी वोर्ल्ड लिंकले १०० एमबिपिएस गतिको इन्टरनेट सार्वजनिक गरेको छ । ५ हजार रुपैयाँमा ४० जिबी भोल्युमको इन्टरनेट दिनुका साथै प्याकेज सकिएको खण्डमा १ एमबिपिएसको अनलमिटेड डाटा दिने वोर्ल्ड लिंकले जनाएको छ । यसै सन्दर्भमा लिभिङ विथ आइसिटीका उप–सम्पादक शिव बस्नेतले वोर्ल्ड लिंकका बजार व्यवस्थापक प्रवीण श्रेष्ठसँग कुराकानी गर्नुभएको छ :
बजार व्यवस्थापक, वोर्ल्ड लिंक
क्यान इन्फोटेकमा वोर्ल्ड लिंकको सहभागिता किन ?
हामी नेपालको पहिलो र नम्बर एक आइएसपी भएकाले आमसेवाग्राहीलाई एकैपटक हाम्रा नया“ सेवाको जानकारी दिन इन्फोटेकमा सहभागी भएका हौं । यही अवसरमा वल्र्डलिंकले १०० एमबिपिएस इन्टरनेट सेवा सार्वजनिक गरेका छौं भने एउटै केबल लाइनबाट इन्टरनेट, टिभी र टेलिफोन प्रयोग गर्न सकिने प्रविधि पनि प्रदर्शनीमा राखेका छौं ।
नेपालका लागि १०० एमबिपिएस गतिको इन्टरनेट सेवा संभव छ ?
केही समयअघि केबिपिएसको जमाना थियो । हामीले १० र २५ एमबिपिएस इन्टरनेट ल्यायौं । अहिले नेपालमै पहिलोपटक १०० एमबिपिएस इन्टरनेट सार्वजनिक गरेका छौं । योस्तरको उच्च गतिको इन्टरनेट नेपालमा संभावना छ भनेर सम्पूर्ण सेवाग्रँही र अवलोकनकर्तालाई बुझाउनकै लागि इन्फोटेकमा सहभागी भएको हौं ।
१०० एमबिपिएसको इन्टरनेट सेवामा विशेष प्याकेज के ल्याउनु भएको छ ?
यो सेवाको मूल्य प्रतिमहिना ५ हजार राखेका छौ । यसमा ४० जिबी डेटा भोल्युम दिएका छौ । यदि बीचैमा यो प्याकेज सकिएको खण्डमा १ एमबिपिएसको अनलिमिटेड प्यकेज उपलब्ध गराउदैछौ । एक वर्षको सब्स्क्रिप्सनमा इन्सटलेसन र राउटर खर्च निशुल्क गरेका छौं ।
योस्तरको इन्टरनेट सेवा भोल्युममा आधारित नभई अनलिमिटेड दिन किन सकिरहनु भएको छैन ?
अनलिमिटेड डाटा दिन नसकिने होइन । तर सेवाग्राहीको बजेटले कत्तिको धान्न सक्छ त भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । केबल घरायसी प्रयोजनका लगि २५ वा १०० एमबिपीएस डाटाको मूल्य धेरै हुने भएकाले साधारण नेपालीले एफोर्ड गर्न सक्दैनन् । यसकारण उच्च गतिको इन्टरनेटको अनुभव गर्न पाउन् भनेर नै हामीले भोल्युममा आधारित सेवा ल्याएका हौ । अन्तराष्ट्रिय स्तरमा पनि भोल्युममा आधारित नै इन्टरनेट सेवा हुने गरेको छ । यति भनिरहदा हामीसग अनलिमिटेड प्लान नभएको होइन । फाइबरमार्फत ३८४ केबिपिएस, ५१२ केबिपिएस र १ एमबिपिएस अनलिमिटेड सेवा छ र हालै मात्र ३ एमबिपिएस र ५ एमबिपिएस अनलिमिटेड सेवा पनि दिन थालेका छौ ।
Previous वोर्ल्ड लिंकले १०० एमबिपिएस गतिको इन्टरनेट ल्यायो
Next काठमाडौंमा दुईदिने अन्तर्राष्ट्रिय आइसिटी सम्मेलन सुरु